China delta p oxygen warshad samaynta mashiinka iyo soo saarayaasha | Sihope
Warshada Ogsajiinta Caafimaadka
Geedka oksijiinta PSA oo leh sanduuq
dhaliyaha ogsijiinta ku jirta
Soosaariyaha Ogsajiinta ee PSA
Nadiifiyaha hawada sifaynta balaasmaha
Dhirta Nitrojiinka ee PSA
Qalabka kala-soocidda hawada warshadaha
Koronto-dhaliye ozone oo isku-dhafan
warshad ogsijiinta isbitaalka hoyga
KBA Isku darka Qalajiyaha Hawada Hoose ee Dhibcaha Hoose
Qalajiyaha Hawada Qalajiyaha Aan Kuleyl Lahayn
warshad ogsijiin caafimaad weel ku jira
Delta p oxygen samaynta mashiinka
Waxaan ku soo saareynaa warshad ogsijiin PSA annagoo adeegsanayna tignoolajiyada PSA ee ugu dambeysay (Pressure Swing Adsorption). Inaga oo ah hormuudka soo saaraha warshadda ogsijiinta ee PSA, waa halkudheggeena in aan macaamiisheenna gaarsiinno mashiinnada ogsajiinta oo la siman heerarka caalamiga ah haddana ah mid aad u qiimo badan. Waxaan isticmaalnaa alaab tayo sare leh oo laga soo iibsaday alaab-qeybiyeyaasha ugu wanaagsan warshadaha. Ogsajiinta laga dhaliyo matooriyaha ogsijiinta ee PSA waxa ay buuxisaa shuruudaha warshadaha iyo sidoo kale codsiyada caafimaadka. Shirkado badan oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa isticmaalaya warshada ogsajiinta ee PSA waxayna goobta ku soo saarayaan ogsijiinta si ay hawlahooda u wadaan.
Matoorkeena Ogsajiinta waxaa sidoo kale lagu isticmaalaa cisbitaalada sababtoo ah ku rakibida gaaska oksijiinta ee goobta ayaa ka caawisa cosbitaalada inay soo saaraan ogsijiin iyaga u gaar ah oo ay joojiyaan ku tiirsanaanta dhululubada ogsijiinta laga soo iibsaday suuqa. Soosaarayaasha ogsajiinta, warshadaha iyo xarumaha caafimaadku waxay awoodaan inay helaan sahay oksijiin ah oo aan kala go' lahayn. Shirkaddayadu waxay adeegsataa tignoolajiyada casriga ah marka ay samaynayso mashiinnada ogsijiinta.
Nidaamka oo dhan wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda: qaybaha nadiifinta hawada cufan, taangiyada kaydinta hawada, qalabka kala-soocida oksijiinta iyo nitrogen, taangiyada kaydinta oksijiinta.
1, qaybaha sifaynta hawada cufan
Hawada cufan ee ay bixiso kombarestarka hawada ayaa marka hore la geliyaa kulanka sifaynta hawada cufan. Hawada isku dhufatay ayaa marka hore ka saaraysa shaandhada tuubada si ay u saarto inta badan saliidda, biyaha, iyo boodhka, ka dibna waxa sii sii saara qalajiyaha barafaysan si ay biyaha uga soo saarto, shaandhooyin fiican si ay uga saarto saliidda, iyo boodhka. Nadiifinta qoto dheer waxaa fuliyaa shaandhada aadka u fiican isla markiiba ka dib. Marka loo eego shuruudaha shaqada ee nidaamka, Shirkadda Chen Rui waxay si gaar ah u nashqadaysay qalab hawada ka saaraya oo la cufan si ay uga hortagto soo gelista suurtogalka ah ee saliidda raadraaca, iyada oo siinaya ilaalin ku filan shaandhada molecular. Qayb si fiican loo qaabeeyey sifaynta hawada ayaa hubinaysa nolosha shaandhada molecular. Hawo nadiif ah oo lagu daaweeyay qaybtan ayaa loo isticmaali karaa hawada qalabka.
2, haamaha kaydinta hawada
Doorka haamaha kaydinta hawadu waa inay yareeyaan garaaca qulqulka hawada waxayna u dhaqmaan sidii baqdin; Isbeddelka cadaadiska ee nidaamka waa la dhimay, hawada isku dhufatayna si habsami leh ayaa loo sifeeyaa iyada oo loo marayo kulanka hawada isku dhafka ah si si buuxda looga saaro saliidda iyo biyaha wasakhda ah loona yareeyo culeyska PSA ee xiga ee ogsijiinta iyo kala-soocida nitrogen. Isla mar ahaantaana, marka munaaradda adsorption la damiyo, waxay sidoo kale siinaysaa PSA qalabka kala soocida nitrogen ee oksijiinta qadar badan oo hawo cadaadis ah oo loo baahan yahay wakhti gaaban si ay si degdeg ah u kordhiso cadaadiska, si cadaadiska ku jira munaaradda adsorption si dhakhso ah u kordho. cadaadiska shaqada, hubinta in la isku halleyn karo oo xasilloon ee qalabka.
3, Aaladaha kala soocida nitrogen ee Ogsajiinta
Waxaa jira laba munaaradood oo A iyo B ah oo ku qalabaysan shaandho molecular oo go'an. Marka hawada nadiifka ah ee cufan ay gasho halka laga soo galo Tower A oo ay ku socoto shaandhada molecular ilaa meesha laga baxo, N2 ayaa lagu dhejiyaa iyada, oo badeecada Ogsajiinta ayaa ka soo baxda meesha laga soo galo munaaradda xayeysiinta. Muddo ka dib, shaandhada molecular ee munaaradda A waa la xoojiyey. Waqtigan xaadirka ah, Tower A waxay si toos ah u joojisaa xayeysiinta, hawada ciriiriga ah waxay u socotaa Tower B si ay u nuugaan nitrogen si ay u soo saarto ogsijiinta, iyo dib u soo kabashada Tower A shaandho molecular. Dib-u-soo-nooleynta shaandhada molecular waxaa lagu gaaraa iyadoo si degdeg ah loo yareynayo munaaradda xayeysiinta ee cadaadiska atmospheric si meesha looga saaro nitrogen-ka la daawado. Labada munaaradood waxay u beddelaan xayeysiis iyo dib u soo noolayn, dhammaystiran oo kala soocida ogsijiinta iyo nitrogen, waxayna si joogto ah u soo saaraan ogsijiin. Nidaamyada kor ku xusan waxaa dhammaan gacanta ku haya kontaroolayaasha barnaamijka (PLCs). Marka nadiifinta oksijiinta ee dhamaadka qiiqa la dejiyo, barnaamijka PLC wuxuu u shaqeeyaa inuu si toos ah u faarujiyo waalka oo si toos ah u faarujiyo ogsijiinta aan u qalmin si loo hubiyo in ogsijiinta aan u qalmin aysan ku qulqulin barta gaaska. Marka gaaska la sii daayo, qaylada ayaa ka yar 75 dBA by aamusiyaha.
4, haanta kaydisa oksijiinta
Taangiyada kaydinta ogsijiinta waxaa loo isticmaalaa in lagu dheellitiro cadaadiska iyo nadiifnimada ogsijiinta ee laga soocay nidaamka kala soocida oksijiinta nitrogen si loo hubiyo sahayda joogtada ah ee xasilloonida ogsijiinta. Isla mar ahaantaana, ka dib marka taawarka xayeysiinta la damiyo, waxay ku dallaci doontaa qaar ka mid ah gaasta u gaarka ah munaaradda xayeysiinta. Dhinaca kale, waxay ka caawin doontaa munaaradda adsorption si ay u kordhiso cadaadiska, waxayna sidoo kale door ka ciyaari doontaa ilaalinta lakabka sariirta. Waxay door aad u muhiim ah ka ciyaari doontaa habka hawlgalka qalabka.
Geedi socodka socodka sharaxaad kooban
Hore: warshad ogsijiin caafimaad weel ku jira
Xiga: Qalajiyaha Hawada Qalajiyaha Aan Kuleyl Lahayn
Warshadaha Ogsajiinta Psa
Generator Ogsajiin Psa System
Ogsajiinta Psa Generator
Dab dhaliyaha Ogsajiinta ee Psa
Psa Ogsajiinta Dhaliyaha Bulkbuy
Mashiinka Samaynta Gaasta Ogsajiinta ee Caafimaadka Psa...
Qalabka Soosaarida Gaas Nadiifinta Sareya ee PSA Ogsajiinta...
Dhirta Soosaarka Ogsajiinta Caafimaadka ee Psa Ogsajiinta Hida...
Qalabka kala soocida hawada caafimaadka
Si otomaatig ah oo otomaatig ah u shaqeynaya kala soocida hawada PSA ox...
Ilaa hadda, waxaa jira in ka badan 1000 shirkadood iyo machadyo caafimaad oo la doortay alaabtayada.
Degmada Fuyang, Magaalada Hangzhou, Gobolka Zhejiang